Miala kely amin’ny mahazatra …
Isan’ny antoka iray hahazoan’ny vehivavy fahafinaretana ny fomba fitsofoky ny taovam-pananahan’ny lehilahy any anatiny.
Ambony seza, latabatra… fahafinaretana tsara kokoa
Ankoatra ny fandriana dia misy toeran-kafa azo hanatanterahana ny firaisana ara-nofo. Sady mba miova amin’ny mahazatra izany no mahafantatra paozy hafa, mampianoka fahafinaretana hafa ihany koa.
Tandremo ny miray mandritra ny fadimbolana!
Miakatra kokoa ny tahan’ny tsiry mpanentana rehefa akaiky ny fadimbolana na mandritra ny fadim-bolana mihitsy. Raha hiray ara-nofo amin’io fotoana io anefa, inona no mety hitranga ?
Miray ara-nofo miadana, manome fahafinaretana kokoa !
Misy karazany maro ny fomba ifampizaràna mamy eo am-pandriana. Arakaraky ny aingam-panahin’ny mpifankatia ihany koa.
Fahafinaretana azo ao anatin’ny 1 minitra !
Mila taitairina foana ny fiainana ara-pananahana mba tsy hahamonamonaina ny mpivady, rehefa eny ambony fandriana. Tsy mila fanomanana be tahaka ny inona, fa ireto zavatra ireto dia mety hahazoana fahafinaretana, anatin’ny 1 minitra monja.
Mitondra voka-tsoa ho an’ny zaza am-bohoka sy ny mpivady ny firaisana ara-nofo
Tsy tokony ho sakana tsy hanaovan’ny mpivady firaisana ara-nofo mihitsy ny vohoka, eny fa na efa miha-mibontsina aza ny kibo. Ireto avy ny tombon-tsoan’io firaisana ara-nofo io, indrindra ho an’ny vehivavy bevohoka.
andro eran-tany ho an’ny zon’olombelona, dia misy hatrany ny hetsika hiadiana amin’izay herisetra mahazo ny vehivavy izay. Isan’ny karazana herisetra iainan’ny vehivavy maro ny herisetra ara-nofo, izay miseho amin’ny endrika fanolanana, mazàna. Na eo amin’ny mpivady aza dia misy an’izany herisetra izany ihany koa…
Tsy eken’ny fiarahamonina
Amin’ny ankapobeny, sarotra ho an’ny fiarahamonina ny manaiky, fa naolan’ny vadiny ny vehivavy anankiray. Mazàna mantsy no heverina fa adidin’ny vehivavy ny manaiky hiray ara-nofo amin’ny vadiny ary tsy manana zo handà ny vehivavy rehefa ny lehilahy no mangataka an’izany. Na ilay vehivavy niharan’ny herisetra ara-nofo aza, amin’ny ankapobeny, dia tsy mahasahy manaiky akory fa voaolana, rehefa noteren’ny vadiny hiray aminy. Eo mantsy aloha ny henatra, satria ny vehivavy voaolana rehetra dia mandalo an’izay henatra izay daholo ; eo koa ny fanamelohan-tena, satria maro no mihevitra hoe : « noho ny nataoko ihany no nahavoaolana ahy », fa eo ihany koa ny tsindrin’ny fiarahamonina, izay araka ny efa voalaza teo, tsy manaiky loatra fa herisetra ara-nofo ny ataon’ny lehilahy manery ny vadiny hiray.
Rehefa tsia dia tsia
Misy fomba fiheverana anankiray koa manao hoe : rehefa ny vehivavy no manao “tsia” dia “eny” no dikan’izay. Tsy izany anefa fa rehefa tsia dia tsia ! Araka izany, mila hentitra ny vehivavy rehefa mandà tsy hiray amin’ny vadiny. Tokony hahatsapa mantsy fa zo izany, ka tsy misy na iza na iza afaka manery ny hafa hiray ara-nofo. Mba ho fanajana an’ilay vady kosa dia tsara raha manome fanazavana tena mitombina, fa tsy mandà azy fotsiny ary am-panajana no hanaovana an’izany. Raha mbola manery ihany ilay lehilahy dia tsy tokony ho menatra na hatahotra ny hiantso vonjy. Ny tsy azo adinoina dia anao ny tenanao, noho izany, tsy misy na iza na iza tokony ho afaka mikasika azy, raha tsy omenao alalana.
Sao misy olana ?
Fa na izany na tsy izany, raha mitohy lavareny ny tsy fanananao faniriana te hiray amin’ny vadinao, dia misy olana tokony hovahana ao, mba tsy hahatonga ny disadisa ao an-tokantrano. Jereo akaiky, sao manana olana ara-batana na ara-pahasalamana ianao, toy ny fahamainan’ny fivaviana, izay mety ho vokatry ny fikorontananan’ny tsiry mpanentana, nefa mety ho vokatry ny aretina, na ny fanafody nohanina. Tsara raha manatona dokotera “gynécologue”, hijery akaiky ny momba izany. Fantaro ihany koa, sao lafiny ara-tsaina na ara-pihetseham-po no mahatonga anao tsy hanana faniriana ara-nofo, toy ny hoe : mifamaly matetika ianareo mivady, na misy olana hafa tsy mbola voavaha teo aminareo fa nampanginina sy nodiana fanina fotsiny…
Fa ny tena zava-dehibe dia ny fitenenana rehefa tratran’ny fanolanana, eny, na ny vady ao an-trano aza no nahavita izany. Tsy azo avela hangina fotsiny ny herisetra, fa manjary lasa fahazarana ho an’ny mpampihatra azy, raha tsy voasazy tamin’ny zavatra ratsy nataony izy.